SIDA LOO FURO CIYAARTA FACEBOOK - FACEBOOK - 2020
Ugu Weyn Ee Facebook
Siyaabaha looga saari karo codsiyada ka yimaada Facebook
Inta badan, ardayda guriga ayaa laga codsanayaa inay sameeyaan geedka qoyskooda, waxaana jira dad kaliya oo xiiseynaya arrintan. Thanks to isticmaalka software gaar ah, abuuraya mashruucaas oo kale waxay qaadan doonaan waqti aad u yar intii la sawirayay gacanta. Qodobkani waxaanu eegaynaa GenoPro - qalab aad u adeegsanaya samaynta geed qoys.
Goobta shaqada waxaa lagu sameeyaa qaab miis ah oo ku yaal qolka, halkaas oo ay jiraan calaamado gaar ah qof kasta. Taabashadu waxay noqon kartaa qiyaas kasta, sidaa darteed wax waliba waa kooban yahay oo keliya marka la helo xogta la buuxiyo. Dhinaca hoose waxaad arki kartaa tabaha kale, taas oo ah, barnaamijku wuxuu taageersan yahay siminaayo shaqo dhowr mashruuc.
Ku dar qof
Isticmaaluhu wuxuu u magacaabi karaa xubin qoyska ka mid ah calaamadaha la soo jeediyey. Waxay ku beddelaan midab, xajmiga iyo u wareegaan khariidada. Ku darista dhacdooyinka adoo gujinaya mid ka mid ah calaamadaha ama qalabkan. Dhammaan macluumaadka waxaa lagu buuxiyey hal daaqad, laakiin waxaa ku jira muraayado kala duwan. Dhammaantood waxay leeyihiin magacooda iyo xarumahooda iyagoo leh qoraallo, halkaasoo ay lagama maarmaan tahay inay galaan macluumaadka ku habboon.
Ka taxadar tabarka "Sawir"halkaas oo isbeddel faahfaahsan ee muuqaalka calaamadda qofka uu heli karo. Astaan ​​walbuu leeyahay qiime u gaar ah, taas oo laga heli karo daaqadan. Waxaad bedeli kartaa iyo sameynta magaca, sababtoo ah wadamo kala duwan ayaa isticmaalaya taxane kala duwan ama ha isticmaalin magaca dhexe.
Haddii ay jiraan sawirro la xidhiidha qofkan, ama sawirada guud, waxa kale oo lagu soo daabici karaa daaqada qofka ee ku qoran tabarka loo xilsaaray. Ka dib marka lagu daro sawirka wuxuu ku jiri doonaa liiska, muuqaalkiisa thumbnail waxaa lagu soo bandhigi doonaa midigta. Waxaa jira khadad macluumaad leh oo ku saabsan sawirka aad u baahan tahay inaad buuxiso, haddii macluumaadka noocaas ahi joogo.
Saaxiibka Abuurista Qoyska
Muujintan waxay gacan ka geysaneysaa in ay si dhaqso ah u abuurto laan ku yaal geedka, iyadoo waqti yar la siinayo marka lagu daro qof shakhsi ah. Ugu horreyn waxaad u baahan tahay inaad buuxiso xogta ku saabsan ninka iyo xaaskiisa, ka dibna waxay muujiyaan carruurtooda. Ka dib markaad ku dareyso kaarka, editing ayaa la heli karaa wakhti kasta, markaa ka bax oo kaliya khadka kaaga haddii aadan ogeyn macluumaadka lagama maarmaanka ah.
Khariidada waxaa la diyaarin karaa markaad rabto. Tan waxaa loo qabtaa gacanta ama adigoo isticmaalaya qalabka ku habboon. Mid kastaaba wuxuu leeyahay astaanta gaarka ah, kaas oo si kooban u sharaxaya ficilka shaqadan. Fikrad gaar ah waa in la siiyaa tiro badan oo ah awoodaha maaraynta geedaha, oo ka bilaabma qaab-dhismeedka silsiladda saxda ah, oo soo afjaraya dhaqdhaqaaqa dadka. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, waxaad bedeli kartaa midabka qofka si uu u qeexo xiriirka lala yeesho dadka kale ama si gooni u ah.
Marka laga reebo khariidada, dhammaan xogta waxaa lagu darayaa miiska loogu talagalay arrintaan, sidaa darteed mar walba waxaa si dhakhso ah loo helaa warbixin faahfaahsan oo ku saabsan qof kasta. Liiska waxaa loo heli karaa qaabeynta, kala soocida iyo daabacaadda wakhti kasta. Tilmaamahan wuxuu caawin doonaa kuwa koray si aad u ballaaran oo ay horeyba ugu dhib badan tahay in ay dadka raadiso.
Talooyin ku saabsan kuwa bilowga ah
Horumariyayaashu waxay qabteen daryeelka kuwa isticmaala kuwaas oo marka hore la kulmay noocaan software ah, oo soo saaray qaar ka mid ah talooyinka maamulka GenoPro ee iyaga loogu talagalay. Talada ugu faa'iido leh waa isticmaalka furaha kuleylaha, sameynta nidaamka shaqada si dhakhso ah. Nasiib darro, looma qorsheyn karo ama ma arki karo liiska buuxa, waxay noqoneysaa mid ku kooban kaliya talooyin.
Dir si aad u daabacdo
Kadib markii uu dhamaystirayo diyaarinta geedka, waxaa si ammaan ah loogu daabici karaa gawaarida. Barnaamijku wuxuu bixiyaa tan oo wuxuu bixiyaa shaqooyin dhowr ah. Tusaale ahaan, adigaa iska beddeli kartaa qiyaasta khariidada, waxaad dhigeysaa khariidadeynta iyo kala-doorashooyinka kale ee daabacan. Fadlan ogow in haddii dhowr khariidood la abuuro, dhammaantood waa la daabacaa marka hore, markaa haddii kaliya hal geed loo baahan yahay, markaa waa in la cayimaa inta lagu jiro qaabeynta.
Joogista luqadda Ruushka;
Qalab badan oo loo shaqeeyo;
Taageerida shaqo siman oo leh geedo badan.
Barnaamijka waxaa loo qaybiyaa lacag;
Qalabku ma aha mid ku haboon.
GenoPro waxay ku haboon tahay kuwa muddada dheer ku riyooday inay dib u soo celinayaan geedkooda, laakiin ma aysan dhicin. Tilmaamo ka socda horumariyayaashu waxay ku caawin doonaan in ay si dhakhso ah u buuxiyaan xogta lagama maarmaanka ah oo aysan waxba ka maqnaanin, iyo qaab-dhismeed lacag la'aan ah oo khariidada ah ayaa kaa caawin doonta in geedku si sax ah u qiyaaso sida aad u malaynayso.
Kala soocitaanka GenoPro Trial Version
Tree of Life Barnaamijyada si loo abuuro geedka abateed RootsMagic Essentials Gramps
GenoPro - waa barnaamij loogu talagalay geedkii abtiriskooda. Waxay leedahay wax kasta oo loo baahan karo taas. Qoraal la'aanta bilaashka ah ee silsiladaha ayaa kaa caawin doona inaad abuurto khariidad sida aad u aragto.
Kharashka: $ 50
Naqshadaha iyo frizens
https://termotools.com so.termotools.com © Facebook 2020